Pfupiso yebasa "La casa de Bernarda Alba" naFederico García Lorca | Zvazvino Zvinyorwa
Pfupiso pfupiso yebasa "Iyo Imba yaBernarda Alba" naFederico García Lorca
Carmen Guillen | | Type, Mabhuku, Literature, Theater, dzakawanda
Kazhinji, zvinonyanya kutaurwa uye kuzivikanwa Federico Garcia Lorca iyi nhetembo yake, zvakadaro, iye akanyorawo yemitambo. Nhoroondo yakanaka inopa yeiri rake rakakura basa "Imba yaBernarda Alba", mutambo wakanyorwa wakaiswa mukuita zvisingaverengeki pasi pevatungamiriri vakasiyana uye munzvimbo zhinji dzeSpanish jogirafi.
Kana iwe uchida kuziva kuti uyu mutambo ndewani uye uzive zvakakosha izvo, ramba uchiverenga zvishoma kumberi pasi. Nhasi tinokupa pfupiso yebasa "Imba yaBernarda Alba" yakapihwa naFederico García Lorca apo isu tine ruzivo.
1 García Lorca, mutambi wenhau
1.1 "Imba yaBernarda Alba" (1936)
1.1.1 Kubudirira kwezviito zvebasa
García Lorca, mutambi wenhau
García Lorca aive akangwara mutambi Kuwedzera nyanduri shasha, uyo atova kuzivikanwa. Asi haana kungozviziva ega mukunyora mitambo, asi akanyudzwa mukati mayo: iye amene akadhirowa zvipfeko zvevatambi madhirezi, akasarudza pamaseti emitambo yavo uye akatungamira mumiriri.
Mugore 1920 mutambo wake wekutanga waive kubuda: "Iyo Hex yeButafuru". Basa rakaedza kusvika kumaguta akasiyana eSpanish pamwe neboka la tent. Chinangwa chake chaive chekuti nhandare isvike kumakirasi ese enharaunda.
ari madingindira eimba yake yemitambo zvakangofanana zvakafanana nezviri mudetembo rake: kurwira kwe libertad, the rudo and the rufu, nezvimwe. Mumabasa ake, vakadzi vatambi vanomira, vanowanzo dzvanyirirwa, izvo zvinogadzirwa nemunyori nehunyanzvi hukuru.
Mumabasa ake tsika inosanganiswa nekuvandudzwa, senge zvese zvaiitwa mu Chizvarwa che27. Uye zvakare, Lorca munyori anonyatsoziva yega yega yega yeiyo avant-garde mitsva. Kunyangwe neizvi zvese, hazviregi kufunga nezvezvinhu uye mareferenzi kutsika yechinyakare nengano. Nhandare yake inoshandisa dimikira uye mashandisiro ezviratidzo kakawanda uye, kunyangwe pakutanga inoshandisa ndima, gare gare inofarira kushandiswa kweprozi. Hukama uhu pakati penhetembo-prose-theatre, Lorca pachake akazviratidza seizvi:
«Iyo yemitambo ndiyo nhetembo inosimuka kubva mubhuku ikava munhu. Uye kana zvaitwa, anotaura uye anodanidzira, kuchema uye kupererwa. Iyi yemitambo inoda mavara anowanikwa pachiitiko kuti apfeke nhetembo sutu uye panguva imwechete kuratidza mapfupa avo, ropa ... ».
Federico García Lorca. Makore 119 ekuzvarwa kwake. Mitsara nendima
"Imba yaBernarda Alba" (1936)
Iri basa rinotarisana nehutsinye hwehunhu uye kudzvanyirira pabonde kwakaitwa naBernarda pamusoro pevanasikana vake. Bernarda anorayira makore masere ekuzvipatsanura pavari, ichiita magungano enharaunda nezve kuchema kusinganzwisisike. Kuonekwa kwaPepe el Romano, akagadzirira kuroora mwanasikana wedangwe, Angustias, kunokonzera kukakavara. Vese vanasikana, kunze kwemudiki, Adela, vanogamuchira izvo zvavanopihwa naamai vavo. Adela anozove anopandukira hunhu, hwakajairwa naLorca, umo kupokana pakati pechiremera nechishuwo zvinoratidzwa.
Iyo yakagadzwa mune yemazuva ano nguva yemunyori uye yakafemerwa nezviitiko chaizvo, iko kwakanyanya kutsoropodza kuratidzira kwetsika dzenguva iyoyo. Kudzvinyirira kunofungidzirwa kukudzwa uye tsika dzemagariro zvinomiririrwa nehukuru chaihwo muhunhu hwaBernarda, uyo anotadzisa chishuwo uye hupenyu hwehunhu hwaAdela.
Kubudirira kwezviito zvebasa
Kana iwe uchida kuverenga basa iri munguva pfupi, tinokurudzira kuti urege kuverenga pano, sezvo isu tichigona kuburitsa chikamu chakakura chezvinoitika mubasa "La casa de Bernarda Alba".
Chiito chekutanga: Pakafa murume wake, Bernarda Alba akamanikidza vanasikana vake vashanu (Angustias, Magdalena, Amelia, Martirio naAdela) kuchema makore masere akateedzana. Pakati peiyi nharaunda inodzvinyirira, Adela (mudiki pane vese vanasikana) anodzidza kuti Angustias, hanzvadzi yakura, ari kuzoroora Pepe el Romano, uyo Adela anorara naye pachivande.
Chiito chechipiri: La Poncia anowana hukama pakati paAdela naPepe el Romano.
Chiito chetatu: Adela anopandukira uye anoti ane kodzero yekuva mukadzi waPepe el Romano. Bernarda anomupfura uye anoti amuuraya kunyangwe akashaya bara. Apererwa nezano, Adela anomhanya ndokuzvivharira akagadzirira kuzviuraya.
Wakaverenga kana kuona mutambo uyu here? Unosarudza yemitambo kuverenga kana kuona?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Pfupiso pfupiso yebasa "Iyo Imba yaBernarda Alba" naFederico García Lorca
inoyamwa Tula isu xd
Uye ndiudze yako tw hdp
kuverenga kunonakidza kwakaitwa nekutenda kumudzidzisi wangu mhanza
Iko + kbron akadaro
Kuita mhanza mai vako vachisvira kabron
Pindura El + kbron
Suck the bugle bastards kliaos ajhdsaudajsdhsa awante mhangura munyu: v
Pindura El tuolon
the lestico akadaro
nyarara vekare vevabonde, huya undinanzva mafuta mafuta
Pindura kuna el lestico
Ini handipe damn nezve ako akashata makomendi uye iyo conchadesumadre !!!!!!!!!! bata ruzha!
Pindura kuna el_danex
amai vako akadaro
Zvakawanda iwe zvaunoda kuyamwa mune yako tubule yakaratidzwa
TAS ☆ αris akadaro
tas anga aripano
Pindura TAS ☆ αris
iye haha akadaro
eu conchudos ndiri pano chete nekuti ndinofanira kuita pfupiso mira kuyamwa mboro yemumwe neumwe
Pindura kwaari haha
Susana oria akadaro
Kumusoro Spain cabroneeees! Kumwe kuwanikwa kweAmerica taifanira kukuita kuti uone kana tichigona kukuburitsa muKweguru kwechipiri
Pindura Susana Oria
Iko shell yehanzvadzi yako yeSpain, Spain iyo Africa yeEurope hahaha. America yakaparadzwa netsika yayo inosemesa, vapambi chete, mbavha nevabati chibharo, ngatiendei zvavagara vari.
goko rehanzvadzi yako yeSpain
victoria aranda akadaro
Ndinoifarira zvakanyanya kuona kududzirwa kwevatambi kuchikosheswa zvakanyanya uye isu hatisiye kufunga
Pindura kuna victoria aranda
Alexandra tsime rezita rokutanga akadaro
BASA NDAKARIONA UYE DZIMWEWO LEI. NDAKANAKIDZWA ZVAKAFANANA PAZVO ZVESE ZVAKAITIKA. ZVAKANAKA ZVAKANAKA
Demidov naKorolev, vatsvakurudzi veRussia Tom Rob Smith naWilliam Ryan.